मेस्सीसँग दुरुस्तै अनुहार मिल्ने यी व्यक्ति को हुन् त ? यो पढ्नुहोस् – Nepal Sandesh
मेस्सीसँग दुरुस्तै अनुहार मिल्ने यी व्यक्ति को हुन् त ? यो पढ्नुहोस्
२१ पुष २०७४, शुक्रबार मा प्रकाशित
यो दुनियाँमा कहिलेकाहीं चर्चित व्यक्तिका अनुहारसँग मिल्ने व्यक्ति भेटिन्छन् । त्यसरी भेटिएका व्यक्ति रातारात चर्चित भएका छन् । कति चर्चामै सीमित हुन्छन् भने कति त मालामाल पनि हुन्छन् । उनीहरूले चर्चासँगै पैसा पनि कमाउँछन् ।
यस वर्ष एउटा त्यस्तै विषयले निकै चर्चा पायो । त्यो पनि विश्वविख्यात फुटबलर मेस्सीसँग जोडिएको विषय । अहिले स्पेनिस बार्सिलोनाका अर्जेन्टिनी सुपरस्टार लिओनल मेस्सीसँग दुरुस्त अनुहार मिल्ने एक व्यक्ति भेटिएका छन्, इरान देशमा ।झन् रोचक कुरा त यो छ कि, ती व्यक्ति परेछन् मेस्सीका बिग फ्यान । ती इरानी फुटबल समर्थकको नाम रिजा पेरेस्टेस हो । उनी यस वर्ष मेस्सी जति चर्चामा रहे, उनी पनि उत्तिकै चर्चामा रहे ।
रिजा इरानमा सामान्य परिवारमा जन्मिएका व्यक्ति हुन् । तर, उनको सुपरस्टार अनुहार मेस्सीसँग हुबहु मिल्छ । तब उनी इरानमा मात्रै नभएर संसारभर हिट हुने भइहाले ।
यस वर्ष रिजा विश्वभरिका खेल मिडियाका लागि ठूल्ठूला अक्षरमा समाचारका शीर्षक बनिरहे । अहिले पनि उनको चर्चा उत्तिकै छ ।
इरानको चर्चित पत्रिका ‘मेहर’ले केही समयअगाडि मात्र रिजाको तस्बिर प्रकाशित गरेको थियो, जसमा उनी अर्जेन्टिनी जर्सी पहिरिएर बसेका थिए । त्यो तस्बिर रातारात विश्वभर भाइरल नै बन्यो ।
त्यत्ति मात्रै कहाँ हो र ! अर्जेन्टिनी जर्सीमा रिजा दुरुस्तै मेस्सीजस्तै देखिएका छन् । उनको कपाल, दाह्री पाल्ने स्टाइलदेखि लिएर अनुहारको मोहडा सबै मेस्सीसँग मिल्छ । क्या बात !
पछिल्लो समय रिजासँग सेल्फी खिच्ने, उनीसँग भेट गर्ने र डेटिङ गर्न चाहनेको संख्या बढेको छ । रिजाले इरानी मिडयाहरूसँग यो भनेका छन्, मेस्सी ठानेर उनलाई प्रेम प्रस्ताव युवती दिनहुँ बढिरहेका छन् । युवतीदेखि अन्य व्यक्ति पनि उनीसँग भेट्न र डेटिङ गर्न चाहन्छन् । अक्र उनलाई त विदेशका युवतीबाट प्रेम प्रस्ताव आउन थालेको बताइएको छ । सुरु–सुरुमा रमाइलो लागे पनि अहिले भने आफूलाई हैरान पार्ने गरेको उनले जनाएका छन् ।
आफूलाई फुटबल र त्यसमा मेस्सीको बिग फ्यान बताउने रिजा आफूले फुटबल खेल्नेबारे भने बताएका छैनन् । सन् २०१७ मेस्सीका लागि जति चर्चित रह्यो, उनका डुब्लिकेट रिजाका लागि पनि उत्तिकै चर्चाको विषय रह्यो ।
टोकियोमा ३ लाख धनराशीको मैत्रीपूर्ण भलिवल प्रतियोगिता आयोजना हुदैँ
दोस्रो इनिङमा १३० मै समेटियो दक्षिण अफ्रिका, भारतले पायो २०८ रनको लक्ष्य
बार्सिनोलाभन्दा राम्रो खेल्ने टोली अहिलेसम्म अरु छैन
मेस्सीका यस्ता छन् कीर्तिमान, जुन अरु कोहीलाई तोड्न मुस्किल’ पर्छ !
फूटबल स्टार मेस्सी रोनाल्डोबीचको मित्रता यस्तो छ